သတိပေးချက်သမိုင်း Log in ဝင်ရန် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » သတိပေးချက်သမိုင်း Log in ဝင်ရန်
သတိပေးချက်သမိုင်း Log in ဝင်ရန် APK ကို
သငျသညျအကြောင်းကြားစာဗန်းကနေပယ်ချသို့မဟုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့အကြောင်းကြားစာကိုမှဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုစိတ်ကူးဘယ်တော့မှ? အစဉ်အဆက်ကိုသင်မတော်တဆတစ်ခုခုထည့်သွင်းလျှောက်လွှာကနေအကြောင်းကြားစာ / မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နောက်တစ်ကြိမ်ကြောင့်ဖျက်ပစ်သတင်းစကားသို့မဟုတ်အကြောင်းကြားစာကိုဖတ်ချင်တဲ့အခွအေနေ၌သငျရှိပါသလား?
သတိပေးချက်သမိုင်း Log in ဝင်ရန်သင့်ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျဒီ app ကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့သူကအကြောင်းကြားစာမှတ်တမ်းထုတ်လုပ်စတင်ပါလိမ့်မည်နှင့်သင်စာသားနိုင် အဆိုပါအကြောင်းကြားစာသမိုင်းရှုမြင် အချိန်မရွေး။
သင်အလွယ်တကူမျိုး, စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သင်ကသတိပေးချက်သမိုင်း Log in ဝင်ရန်လျှောက်လွှာကို install ပြီးနောက်လက်ခံရရှိအားလုံးအတိတ်အသိပေးချက်များကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
ဒီ app KitKat ကိုအထက်ပေါ်ပြေးအားလုံးနီးပါးက Android စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ app ကိုအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ အဆင့်မြင့်သမိုင်း သင်သည်သင်၏အတိတ်အသိပေးချက်များကိုကျော်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအင်္ဂါရပ်။
သတိပေးချက်သမိုင်း Log in ဝင်ရန် Features:
တစျခုလုံးကို app ကိုမှော်အဆင့်မြင့်သမိုင်းမျက်နှာပြင်တွေ့ကြုံတတ်၏။ သင်လုပ်နိုင်သည် ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုတွေ့မြင် နှင့် အတိတ်ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့။ အဆိုပါအစွမ်းထက်ရှာဖွေရေးသင်သည်အလွန်လွယ်ကူစွာတစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းကြားစာမှတ်တမ်းမှမဆိုသိမ်းဆည်းထားအကြောင်းကြားစာကိုကူညီရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးအသိပေးချက်များကိုသင်အကြောင်းကြားစာကိုသမိုင်း၏အချိန်ဇယားကိုပြသ apps များပေါ်တွင် အခြေခံ. အုပ်စုဖွဲ့နေကြသည်။
သင်တို့သည်လည်းအကြိုက်ဆုံးများရန်အရေးကြီးပါသည်အသိပေးချက်များကို add အတိတ်အသိပေးချက်များကို filter, ထိုစာသားဖိုင်သို့မဟုတ် Excel ကိုဖိုင်ပို့ကုန် * အအကြောင်းကြားစာသမိုင်း, အကြောင်းကြားစာမှတ်တမ်းများနှင့်ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနိုင်ပါတယ်။
→ themes: * သတိပေးချက်သမိုင်း Log in ဝင်ရန်အလင်းနှင့်မှောင်မိုက် themes များနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူကို bundle ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အပြင်အဆင်များလာမယ့်မွမ်းမံမှုများအတွက်ဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်။
→ homescreen Widget လေး: * ချက်ချင်းအကြောင်းကြားချက်ကိုမှတ်တမ်းကြည့်ရှုရန်သင့်အိမ်မျက်နှာပြင်မှ widget က Add
→ အမည်ပျက်စာရင်း Apps ကပ: * သင်ကအကြောင်းကြားစာမှတ်တမ်းများမှာသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုဖို့ apps များနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။
→ Backup ကိုနှင့် Restore *: သင်ကအကြောင်းကြားစာများကို back up နှငျ့သငျအကြာတွင်သတိပေးချက်သမိုင်း Log in ဝင်ရန်ပြန်လည်အခါနောက်တဖန်သူတို့ကို restore လုပ်လို့ရပါတယ်။ အားလုံး Backup တွေကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်အပေါ် encrypted နှင့်သိုလှောင်ထားကြသည်
→ အန်းဒရွိုက်ပုံမှန်သတိပေးချက်သမိုင်း: ထောက်ပံ့ထားသည့်ကိရိယာများတွင်, သငျသညျအစဉ်အလာလမ်းအတွက်အတိတ်အသိပေးချက်များကိုကြည့်ရှုဖို့ Android ရဲ့ default အသတိပေးချက်သမိုင်းကို enable နှင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။ သငျသညျ App ကိုချိန်ညှိမှုများအတွက်ဒီ option ကို enable နိုင်ပါတယ်။
→ Clear ကိုသတိပေးချက်မှတ်တမ်းများ: သငျသညျက Settings ထဲကနေတစျခုလုံးကိုအကြောင်းကြားစာသမိုင်းကိုရှင်းလင်းနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်သင်ပင်တစ်ခုတည်း app ကိုမှတိကျတဲ့အဆိုပါအကြောင်းကြားစာများကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
သတိပေးချက် Access ကို: အကြောင်းကြားစာဗန်းကနေအကြောင်းကြားစာများရရှိရန်နှင့်သင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ဒေသအလိုက်သူတို့ကိုသိမ်းထားဖို့
သိုလှောင်မှု: Excel အတွက်အသိပေးချက်များကိုသို့မဟုတ်စာသားဖိုင်တွေတင်ပို့ဖို့နှင့် encrypt လုပ်ထားသည့်အကြောင်းကြားစာများ backup တခုကိုဖန်တီးရန်
အင်တာနက်: ကြော်ငြာပြသခြင်းနှင့် Pro ကိုဗားရှင်းဝယ်ယူဘို့ရန်
1 ။ အတူမှတ်သားအင်္ဂါရပ်များ (*) အ Pro ကိုဗားရှင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
2 ။ Xiaomi က, Oppo နှင့် Vivo ကဲ့သို့ device တွင်သင်သည်အော်တိုသတိပေးချက်သမိုင်း Log in ဝင်ရန်လျှောက်လွှာများအတွက် start ကို enable ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျဘက်ထရီချွေတာ, RAM ကို Cleaner သို့မဟုတ်မြန်နှုန်းအာနိသင်တိုးမြှင့် applications များကိုအသုံးပြုနေလျှင်ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုခွင့်ရှိသူစာရင်းထဲထည့်။
App ကို setting တွင် troubleshooting မျက်နှာပြင်ဘုံပြဿနာတွေကိုအများဆုံးပြုပြင်တာတွေ၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်။
3 ။ ဒါဟာသင်တို့သည်ငါတို့၏ application ကို install မလုပ်ခင်လက်ခံရရှိသောအကြောင်းကြားစာများရရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုသာသင် install လုပ်သည့်အခါအချိန်ကနေအကြောင်းကြားစာမှတ်တမ်းထုတ်လုပ်စတင်ခွင့်ပြုချက်ကို enable ပါလိမ့်မယ်။
4 ။ အားလုံးသင့်ရဲ့အသိပေးချက်များကိုသင်၏ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်အပေါ်သိမ်းဆည်းထားသည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏အကြောင်းကြားစာများသို့မဟုတ် data ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်မဆိုကြင်နာမရှိကြပါဘူး။ ကျနော်တို့ privacy ကိုလေးစားသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုလုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံသည်။
အကြောင်းကြားစာများတင်ပို့နေချိန်တွင် fixed App ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျ
အထောက်အထား Apps များအားပြန်ဖြုတ်ရန်၏ကယ်တင်ခြင်းသို့အကြောင်းကြားစာများ
ပင်မမျက်နှာပြင်ဝစ်ဂျက်ထဲကနေလာမယ့်လာသောအခါရဲ့ Refresh အော်တိုအနှစ်သက်ဆုံး
အမှောင် Theme Added 🌚
4.39 ကို MB